I-Sonos kunye ne-IKEA zilungiselela isithethi esihlaziyiweyo kwifomathi yesibane | Ndisuka mac
I-Sonos kunye ne-IKEA zilungiselela isithethi esihlaziyiweyo kwifomathi yesibane
Akubonakali ngathi kukude kakhulu okoko uSonos kunye ne-IKEA basungula i Umgca weSymfonisk apho babeka ukukhanya kunye nesandi kunye. Ngeso sihlandlo isithethi eseludongeni lweencwadi babengabalinganiswa abaphambili.
Ngoku kubonakala ngathi zombini iifemu zifuna ukuphinda impumelelo efikelelweyo ngalo mgca weemveliso kwaye kulindeleke ukuba isixhobo esitsha seSymfonisk sifike kusapho. Isicelo sobhaliso kwi-FCC kunye nemveliso IKEA FHO-E1913 iya kuba sisizukulwana esilandelayo.
Akukho zikhombisi zichanekileyo malunga nokuba esi sixhobo sibhalisiweyo sechungechunge lweSymfonisk sinokuba yintoni, oko kubonakala kucacile kukuba iya kuba yintsebenziswano entsha phakathi kweSonos kunye ne-IKEA. Ngaba Isicelo esenziwe kwi-FCC sisalathiso esicacileyo sokuba umsebenzi uhambele phambili kwaye iziqinisekiso zifunyenwe kunye nemveliso sele ikulungele ukuya kwintengiso.
Asinawo umhla ochanekileyo ukubhengeza ngokungathi asinalo uyilo oluvunyiweyo okanye ixabiso lemveliso. Kuyenzeka ukuba isibane kwisitayile esicocekileyo se-IKEA, mhlawumbi sincinci kunenguqulo yangaphambili kwaye songeza isithethi esisemgangathweni esifana nesoSonos okanye inokuba yinto efana ne-Sonos Sub kodwa kubukhulu obuncinci.
Sifuna ukubona ukuba yeyiphi imveliso okanye iimveliso abazisungulayo ukusukela oko Lo mbutho uhlala ulungile kubasebenzisi ngenxa yexabiso lomgangatho ababonelelayo. Ngokuqinisekileyo ezi zixhobo ziya kugqibela ukwaziswa ngaphambi kokuba kufike ihlobo kodwa akukho nto iqinisekisiweyo nokuba kungoko kufuneka silumke kule meko kwaye singahambeli phambili kuqikelelo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Amahemuhemu » I-Sonos kunye ne-IKEA zilungiselela isithethi esihlaziyiweyo kwifomathi yesibane
Umgca: yipodcast entsha yeApple eya kuthi ibe nothotho lwayo ukuphela konyaka